SIDEE LOO KALA SAARAA NUUGISTA KA SOO JIIDASHADA: HABABKA LAGU KALSOONAAN KARO - BEERAHA DIGAAGA
Maxaa ka duwan daadinta naaska
Wixii beeralayda digaaga, go'aaminta jinsiga digaaga waa hawl muhiim ah. Taas la'aanteed, waa suurtagal in la qorsheeyo waxqabadyada ganacsiga ee jihada this. Hawshu waxaa laga yaabaa inay ku adkaato xaqiiqda ah in tiro badan oo nuugaya ay kala duwan yihiin faraqa u dhexeeya ducks iyo drakes inay dibadda u jajaban yihiin. Nasiib wanaag, waxaa jira tiro calaamado ah oo tilmaamaya jinsiga ducks ee macquul ah, oo ay ku jirto da'da yar.
Dhismaha nidaamka taranka (habka Japanese)
Nidaamkan aqoonsiga waxaa loo tixgeliyaa midka ugu kalsoonaan karo, waana mid ku habboon xayawaanka yaryar iyo shakhsiyaadka qaangaarka ah - way adagtahay in lagu dabaqo miisaanka iyo hawsha shimbirta. Si loo go'aamiyo jinsiga sidan oo kale waa inay fuliyaan tallaabooyinka soo socda:
Shimbirraha qoorta ha ku xidhnaado.
oo faraha gacmaha xorta ah, furo shahwada shimbirta oo ka soo jeeda dhinaca bidixda;
in drake waxaa jira guska isdhexgalka, ee haweenka - koritaanka wareega wareega.
Habka go'aanka jinsiga Japan
Marka loo eego calaamadaha dibadda
Calaamadaha dibedda oo ay ku dhajin karto nuucaan nuucyada soo socda:
Boorashka ragga ah ayaa inta badan si muuqata u iftiimiya marka la eego haweenka, laakiin tani ma aha mid caan u ah dhammaan noocyada;
wejiga qulqulatadu waa ballaaran, oo aad u ballaaran, lafaha hore ee uu ku fidsan yahay qaab saddex-xagal ah (gabadha waxaa ku jira fidinta trapezoidal);
ragga wuxuu leeyahay koriinka gogol-galka (tani ma aha mid lagu arkay dhammaan noocyada);
ee daboolka of drake ah waxaa jira baadho ku xoqeen galay giraan ah, shinbiraha ee baadad kuwaas oo sida laga reebo;
qoorta dharku waa ka dheer yahay dheddigga, sidoo kale, qoorta wiilasha waxay caadi ahaan leeyihiin boogaha baalasha;
ragga waa qiyaastii 1.5-2 jeer oo culus ka badan.
Hab kale oo lagu garto jinsiga digaaga ayaa ah in la ogaado habdhaqanka iyo ducks. Sidaa daraadeed, markaad u guurto xayawaanka duck, ducks ayaa horay u dhaqaaqa, ragga way ka dambeeyaan oo yar yar dhinaca. Intaa waxaa dheer, ragga waxay u muuqdaan kuwo jilicsan, waxay la dagaallami karaan ragga kale si ay u helaan quudinta ama haweenka.
Beeralayda digaaga ah waa in ay tixgeliyaan astaamaha lagu ilaalinayo ducks sida orodka Hindiya, Temp, Kayuga, Bashkir, Mulard, Peking (Star-53) iyo kuwa buluuga ah ee jecel guriga.
Go'aaminta jinsiga by cod ma aha hab aad loo isku halleyn karo. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah dhedigaa marar badan ayay qufacaan, meelahaas oo ay kufilan yihiin oo ay sare u kacaan. Burburintu waxay sameeyaan dhawaaqyo badanaa inta badan, inta badan waxay jecel yihiin in ay dareemaan, mararka qaar waxay u wareegaan foorid hoose. Habka awoowe ee lagu garto jinsiga Waxaa jira hab kale oo caan ah oo lagu garto jinsiga. Daraasadani si tartiib ah ayay u qaadanaysaa biinanka oo hoos u dhigtaa. Haddii uu bilaabo inuu si firfircoon u jebiyo, waxaa la aaminsan yahay in tani ay tahay qulqul. Haddii ay si aamusan u xiran tahay, waxaa loo qaadanayaa in uu yahay duck. Waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan kalsoonida habkan, laakiin waxay si cad u bixisaa 100% aqoonsi oo la isku halleyn karo.
Markaad haysato ducks waa mid aad muhiim u ah in la raaco mabaadii'da cunto isku dheeli tiran. Akhri sida loo habeeyo cuntada si ay u cunteeyaan guriga, sida quudinta ducklings yar yar, iyo sidoo kale sida ay si madax banaan u diyaariyaan cunto quudin for shimbiraha.
Aqoonsiga galmada ee ducklings
Waxaa lagu talinayaa in la go'aamiyo jinsiga shimbirta goor hore, marka weli waa duckling. Si tan loo sameeyo, isticmaal hababka soo socda:
Qaabka habka taranka (habka kor lagu soo sharaxay, waxaa loo isticmaali karaa qoob-ka-jir-maalmeedka waana midka ugu kalsoonaan karo);
oo ku saabsan dabeecadda duckling qabta cantoobada (kor ku xusan faahfaahinta kore);
on dabeecadda dabeecada ee ragga (habkan waxaa sidoo kale lagu sharxay kor);
Habka ultrasonic - by xulashada inta jeer ee ultrasound soo saaro rakibaadda ultrasonic, waxaa lagu go'aamiyey kaas oo ultrasound loo isticmaalo ragga iyo dumarka.
Waa arrin aad muhiim u ah in la go'aamiyo jinsiga duur ku habboon waqtigaa - tani waxay u oggolaaneysaa in la hagaajiyo waxtarka digaaggan, sii kordhaya waxsoosaarkooda, qorshaynta horumarinta beeraha.
Hubaal, waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaato inta maalmood ee nuucaasu ku fadhido ukunta, nooca shimbiraha, sababta nuucaasu u socdo biyaha, iyo sidoo kale inuu la socdo shuruucda ducks duurjoogta duurjoogta ah.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu go'aaminaayo lamaanaha: qaar ka mid ah waa kuwo la isku halleyn karo laakiin weli way sahlan yihiin. Laakiin waa in la xusuustaa in ay jiraan noocyo ducks, kuwaas oo aan dhammaan noocyada aqoonsiga ay ku habboon yihiin.
Video: farqiga u dhexeeya ducks iyo drake